Shiinaha Qurxinta-Qaab-soo-saaraha IML iyo Soo-saare | Meesha
Qurxinta-Qaab-dhismeedka (waxaan ugu magac darnay IMD) waa tiknoolajiyad qurxinta dusha sare oo caan ka ah adduunka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta dusha sare iyo guddi hawleedka qalabka korontada ee guriga. Waxaa badanaa loo adeegsadaa qeybta iyo calaamadaha muraayadaha muraayadda mobilada iyo qolofka, guddiga xakamaynta mashiinka dharka, guddiga xakamaynta qaboojiyaha, guddiga xakamaynta hawo-qaboojinta, muraayada gawaarida, guddiga kontoroolka makiinada karinta cuntada iwm.
IMD waxay u qaybsan tahay IML (IMF waxay ka tirsan tahay IML) iyo IMR, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada geeddi-socod ayaa ah in dusha alaabtu leedahay filim ilaalin hufan.
IMD waxaa ku jira IML, IMF, IMR
IML ： IN MADASHADA LABEL (qalabka daabacaadda iyo qaybaha balaastigga ah)
IMF ： IN FURSAD FILIM AH (oo lamid ah IML)
IMR: AKHRISO MADLI
IML (LABADA HOOS KU ​​DHAQME): Waxyaabaha aadka u cajaa'ibka badan ee IML waa: dusha sare waa lakab filim adag oo hufan, dhexda waa lakab qaab daabacan, gadaalna waa lakab balaastik ah, maxaa yeelay khadku dhexda dhexda, ka ilaaliya dusha sare inay xoqdo oo xoqdo, waxayna ilaalin kartaa qaabka midabku inuu dhalaalayo oo uusan sii libdhi karin muddo dheer. Astaamahani waxay ka dhigaan alaab IML si ballaaran loo isticmaalo.
Nidaamka IML: PET film jarida- daabacaadda diyaaradda - qalajinta qalalan go'an - dheji filimka difaaca - feerida godka -Thermoforming - xiirashada qaabka durugsan - wax taaj oo kale duro wax taaj oo kale.
Qaab dhismeedka saddexda shey ee sheyga IML:
1. Dusha sare: Filim (filimka PET, daabacaadda qaab iyo midabba). Qoryo, kiliyaha, bamboo, maro, qoryo ku dayasho ah, maqaar ku dayasho ah, maro ku dayasho ah, bir ku dayasho iyo wixii la mid ah;
2, lakabka dhexe: khad (khad), koollo, iwm.
3, hoose: caag (ABS / PC / TPU / PP / PVC, iwm).
IMR (IN MOL ROLLER): Nidaamkan, qaabka ayaa lagu daabacay filimka, filimka iyo saabka caaryada waxaa isku xiraya quudiyaha filimka si loogu miiro duritaanka.
Cirbada kadib, lakabka khadaka leh qaab ayaa laga soocayaa filimka, lakabka khadkuna wuxuu ku haray qaybta balaastigga si loo helo qaybta balaastigga oo leh qaab qurxin leh.
Ma jiro filim ilaalin hufan oo ku saabsan dusha alaabta ugu dambeysa, filimkana waa la soo saaraa oo keliya. Side side hawsha ku jira. Laakiin faa'iidada IMR waxay ku jirtaa heerka sare ee otomaatiga ee wax soo saarka iyo qiimaha hooseeya ee wax soo saarka ballaaran. IMR cilladaha: Lakabka qaabka daabacan ee dusha sare ee badeecada, dhumucda kaliya dhowr mikroonoon, badeecadu way fududaan doontaa in laga xiro lakabka daabacan ee daabacan mudo kadib, laakiin sidoo kale way fududahay in la libdho, taasoo keentay wax aad u xun dusha sare Intaas waxaa sii dheer, wareegga horumarinta wax soo saarka cusub wuu dheer yahay, qiimaha horumarku waa mid sareeya, midabka qaabku ma gaari karo dufcad yar oo isbeddel dabacsan sidoo kale nidaamka IMR kama adkaan karo daciifnimada Waxaa lagama maarmaan ah in lagu sharaxo fikrad ahaan: Tilmaamaha muhiimka ah ee IMR waa lakabka sii deynta.
Nidaamka IMR: Filimka PET - wakiilka sii deynta - khad daabacaadda - Daabacaadda daabacaadda - cirbadda caagga ah ee gudaha - khad iyo caag ka dib - ka dib furitaanka caaryada, filimku si otomaatig ah ayuu uga sii daayaa khadka. Ka sokow tayada xaashiyaha daabacan, boodhku saameyn weyn ayuu ku leeyahay tayadooda, wax soo saarkoodana waa in lagu sameeyaa jawi nadiif ah oo aan boodh lahayn.
Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya IML iyo IMR ayaa ah inay jiraan meelo muraayadaha indhaha oo kala duwan, oo leh PET ama go'yaal PC ah oo ku yaal dusha IML iyo kaliya khad dusha sare ee IMR. IML iska caabbinta, iska caabbinta xoqida iyo qaabka midabka muddo dheer. IMR waxay ku habboon tahay wax soo saar ballaaran iyo qiimo jaban. IMR ma aha mid aad u adkeysata xirmooyinka, taleefannada Nokia iyo Moto waa qeyb ka mid ah teknolojiyadda IMR, waqti yar oo ka dheer ayaa sidoo kale keena xoqid; cilladda ugu weyn ee IML waa in aan loo hirgelin karin gebi ahaan teknolojiyadda IML, oo ​​keliya ku xaddidan aag joogto ah.
Noocyada alaabooyinka IMD / IML:
1, naqshadeynta alaabta iyo midabka oo la caddeeyo, marna ma libdho, iyo dareen saddex-cabbir leh;
2, badeecadu waxay leedahay nolol adeeg dheer, dusha sare ee iska caabbinta iyo iska caabbinta xoqida, waxayna ka dhigeysaa muuqaalka mid nadiif ah oo cusub.
3, saxnaanta daabacaadda + 0.05mm, waxay daabacan kartaa qaabab isku dhafan oo midabbo badan leh;
4, qaabka iyo midabka waa la beddeli karaa wakhti kasta inta lagu jiro hawsha wax soo saarka iyada oo aan la beddelayn caaryada.
5. Qaabka wax soo saarka IML ma aha oo kaliya qaab diyaaradeed, laakiin sidoo kale waa qaabka dusha qalooca, dusha qallooca, dusha sare ee u janjeedha iyo saamaynta muuqaalka kale ee gaarka u qaabaysan.
6, sheyga kuma jiraan wax xabag ku saleysan dareeraha, oo buuxiya shuruudaha deegaanka.
7. Isku gudbinta dariishadaha ayaa gaaraya ilaa 92%.
8. Fureyaasha shaqeynaya waxay leeyihiin goobooyin isku mid ah iyo gacmo wanaagsan. Furayaashu waa kuwa jajaban marka lagu durayo caaryada. Nolosha furayaasha ayaa gaari kara in ka badan hal milyan oo jeer.
Kiis IMD caag ah
Guddi hufan oo leh IML
IML kiiska qalabka isgaarsiinta
Qalabka muhiimka ah ee guriga IMD
Waqtigan xaadirka ah, IML waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhinacyo badan, sida daaqadaha, qolofka, muraayadaha indhaha, gawaarida iyo qalabka koontaroolada qalabka korontada iyo qaybaha qurxinta, kuwaas oo loo horumarin doono sumadaha kahortaga been abuurka iyo warshadaha baabuurta mustaqbalka. Wax soo saarku wuxuu leeyahay waxqabadka qorraxda oo wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa calaamadaha gawaarida, adkaanta illaa 2H ~ 3H, waxaa loo isticmaali karaa muraayadaha indhaha ee taleefanka gacanta, iwm, nolosha badhanka waxay gaari kartaa in ka badan 1 milyan oo jeer, waxaa loo isticmaali karaa karinta bariiska iyo sidaas on.
IMD / IML waxay soo saari kartaa qayb leh muuqaal qurux badan waxayna xirataa dusha u adkaysta. Laakiin qiimaha ayaa ka sarreeya qaybaha guud ee dusha sare. Haddii alaabtaadu u baahan tahay badeecad noocaas ah, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Balaastiig xad dhaaf ah
Xiga: Gali wax taaj oo kale ah